नेकपा बैठकमा ओली-प्रचण्डलाई बामदेबको टक्करः छुट्टै प्रतिवेदन पेश – On Khabar
Banner News गृहपृष्ठ
नेकपा बैठकमा ओली-प्रचण्डलाई बामदेबको टक्करः छुट्टै प्रतिवेदन पेश
काठमाण्डु, २९ मंसिर – नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षहरूलाई टक्कर दिँदै नेता बामदेब गौतमले छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । अध्यक्षद्धयको प्रतिवेदनपछि गौतमले व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । ओलीसँग निकट रहेका गौतम पछिल्लो समय ओलीसँग रुष्ट हुँदै आएका छन् ।
उनले तत्कालीन एमालेमा हुँदा पनि आफ्नो छुट्टै गुटका लागि कोसिस गर्थे । महाधिवेशनका बेलामा ओलीसँग निकट भएका थिए । तर, पार्टी एकतापछि भने गौतम अध्यक्ष ओलीसँग रुष्ट हुँदै गएका छन् । अध्यक्षहरु र गौतमको प्रतिवेदनपछि बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सोमबार विहान ११ बजेका लागि डाकिएको छ । आइतबार प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय छुट्याइएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
लोभि मन्त्रीहरुको लिस्ट : घरभाडाँदेखी इन्धनभन्दै सुटुक्क लिन्छन यतिधेरै पैसा !
December 20, 2018 December 20, 2018 onkhabar
अनखबर, पौष ५ काठमाडौंप्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’को नारा दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर, उनी नेतृत्वका २४ मध्ये २३ मन्त्री र राज्यमन्त्रीले इन्धनमा समेत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार इन्धन खर्च लिइरहेका उनीहरूले मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयबाट तेल हालिरहेका छन् ।अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय निर्णय गराएर एक सय ५० देखि तीन सय लिटरसम्म इन्धन […]
November 20, 2018 onkhabar
विराटनगर, मंसिर ४ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोइराला परिवारसँग आफ्नो कुनै विवाद नरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन मोरङले विराटनगरमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले कोइराला परिवारका तीनवटै नेताबीचको एकताले पार्टीलाई सङ्गठित बनाउन थप मद्दत पुग्ने बताए । कोइरालाबीचको एकताबाट गाउँ, नगर क्षेत्र तथा जिल्लामा समेत पार्टी सङ्गठन विस्तारमा […]
किन आए प्रधानसेनापति थापा बुटवलको जितगढी किल्लामा ?
December 19, 2018 December 19, 2018 onkhabar
अनखबरपुस ४, बुटवल प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मुलुकको ऐतिहासिक सम्पदा बुटवलको जितगढी किल्लाको आज स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । सो अवसरमा उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जितगढीमा नेपालकै ठूलो राष्ट्रिय झण्डा र स्व। कर्णेल उजिरसिंह थापाको पूर्ण कदको शालिक बनाउन लागेकोलगायतका एकीकृत पर्यटन विकासका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले जितगढीमा नेपाली सेनाले पनि नियमित ड्यूटी गर्ने […]
पाथिभरा माताको दर्शन गरी , हेर्नुहोस् तपाईंको आज!